Kulesi sihloko, sizoxoxa ngendaba yezinombolo zesiJalimane. Izinkulumo zezinombolo zesiJalimane zivame ukuboniswa kubafundi besikole samabanga aphansi abaqala ukufunda isiJalimane. Njengoba nazi, izinombolo ziyizinkulumo ezakha izinombolo ukusuka kweyodwa kuye kweyisishiyagalolunye futhi zisetshenziselwa ukubhala izinombolo. Ngamanye amazwi, umushwana ngamunye 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 iyinombolo. 10-11-12-13-14-15-20-30-50-100 njll. Izinkulumo ezinjengezinombolo ziyizinombolo ezidalwe kusetshenziswa izinombolo.
Njengoba wazi, kokubili isiJalimane nesiTurkey, inombolo enkulu kunazo zonke ngu-9 (isishiyagalolunye) futhi inombolo encane kakhulu ngu-0 (zero). Manje, ake sinikeze izinombolo ngesiJalimane njengezithombe ngendlela abafundi bethu besikole samabanga aphansi abangayiqonda. Ngezansi izinombolo zesiJalimane ukusuka kuqanda kuye kweyisishiyagalolunye. Uma silungiselele kabanzi, ukusuka ku-zero kuye ezigidini, Izinombolo zesiJalimane Uma ufuna ukufunda isifundo sethu, chofoza lapha: Izinombolo zesiJalimane
Izinombolo zesiJalimane : 0 NULL
Izinombolo zesiJalimane: 1 EINS
Izinombolo zesiJalimane : 2 ZWEI
Izinombolo zesiJalimane: 3 DREI
Izinombolo zesiJalimane : 4 VIER
Izinombolo zesiJalimane : 5 FUNF
Izinombolo zesiJalimane : 6 SECHS
Izinombolo zesiJalimane: 7 SIEBEN
Izinombolo zesiJalimane: 8 ACHT
Izinombolo zesiJalimane: 9 NEUN
Yilokho kuphela kwencazelo yesihloko sezinombolo zesiJalimane, bangane. Kakade kusayithi lethu kunezifundo eziningi zokubhala, ukufunda nokudala izinombolo zesiJalimane kusuka ku-zero kuya ezigidini. Ungafaka isicelo sezifundo ezihlobene. Njengoba kungekho okunye okungashiwo mayelana nezinombolo zesiJalimane, sikunqamule lapha. Sinifisela impumelelo ezifundweni zenu zesiJalimane, futhi sibingelela abafowethu abakwamanye amazwe abangena kusizindalwazi sethu bevela eJalimane.
# Amanani aseJalimane
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe enyangeni engu-1 edlule, ngoNovemba 05, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoDisemba 4, 2021.
Tags: Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-10, Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-5, Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-6, Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-7, Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-8, Izinombolo zesiJalimane zekilasi eziyi-9